Ungayifaka njani iifoto kwi-Instagram ukusuka kwi-PC: Icacisiwe inyathelo ngenyathelo | Iindaba zeGajethi
Ungayifaka njani iifoto kwi-Instagram ukusuka kwi-PC
I-Instagram ithweswe isithsaba njengenye yezona zicelo zidumileyo kwihlabathi liphela. Inethiwekhi yentlalo inezigidi zabasebenzisi, ukongeza ekuqhubekekeni kokukhula kwinqanaba elifanelekileyo ngokuhamba kwexesha. Ekuqaleni, le nethiwekhi yoluntu yazalwa njengesicelo sefowuni eziphathwayo. Nangona kamva inguqulelo yayo yewebhu yadalwa. Okuvumela ukubrawuza kwikhompyuter kuyo.
Kancinci kancinci imisebenzi iye yaziswa kule web version ye-Instagram. Ngapha koko kufuneka isetyenziswe ukuba ufuna ukucima iakhawunti. Omnye wemisebenzi ethe yaziswa ngokufanayo linokwenzeka lokulayisha iifoto. Ke ngoko, unokufaka iifoto kwiprofayile yakho kwikhompyuter yakho.
Ngumsebenzi onokuba luncedo kakhulu kumaxesha amaninzi. Ke ukuba awunayo ifowuni ekufuphi, okanye ukuba ifoto ofuna ukuyilayisha igcinwe kwikhompyuter yakho, ukusebenzisa lo msebenzi kunokuba lula kakhulu. Ke ngoko, kubalulekile ukwazi ukuba oku kusebenza njani kwi-Instagram. Okulandelayo, siza kukuxelela yonke into ngendlela onokuthi ulayishe ngayo iifoto kwinethiwekhi yoluntu ukusuka kwinguqulelo yayo yedesktop.
1 Ngenisa iifoto kwi-Instagram kwi-PC
1.1 Ngenisa iifoto ukusuka kwi-PC ukuya kwi-Instagram: Amanyathelo
2 Umahluko ngokulayisha kwi-smartphone
Ngenisa iifoto kwi-Instagram kwi-PC
Njengoko kusengqiqweni, into yokuqala yokwenza kukufaka ingxelo yewebhu yenethiwekhi yoluntu, kwesi sixhobo. Kuya kufuneka ungene kwiakhawunti yomsebenzisi, ukuba akukho seshoni esele iqalile. Nje ukuba iseshoni iqalile kwinethiwekhi yoluntu, Kuya kufuneka ufake iprofayile yomsebenzisi. Yenziwa ngokunqakraza kwi icon emile okomntu ekunene phezulu. Yimpawu yesithathu ukusuka ekhohlo. Unokucofa kwigama lomsebenzisi elivela kwicala lasekunene lesikrini. Zombini iinketho zisikhokelela kwiprofayili. Ke sinokuqala.
Ke, xa sele singaphakathi kwiprofayili, sijonga ii icon ezibonakala ngasekunene kwegama lomsebenzisi. Apha ungayibona loo nto i-icon ngasekunene yikhamera enemigca emininzi enemibala, enophawu + ngasezantsi ngasekunene. Le yile icon apho kufuneka sicinezele khona ukuze sikwazi ukufaka iifoto kwi-Instagram kwi-PC. Ke xa sicofa kuyo, inkqubo yokufaka ifoto esifuna ukuyifaka kwinethiwekhi yoluntu iqala. Amanyathelo ekufuneka elandelwe abonisiwe apha ngezantsi.
Ngenisa iifoto ukusuka kwi-PC ukuya kwi-Instagram: Amanyathelo
Xa ucofa kule icon, into yokuqala esiyicelwayo yile ukuba sifuna ukongeza esi sithombe kwiprofayili okanye kumabali. Umsebenzisi ngamnye kufuneka akhethe ukhetho abanomdla kulo. Kule meko, into esiza kuyenza ukufaka ifoto kwiprofayile yethu kwi-Instagram. Ke ngoko, sikhetha olo khetho kwiscreen. Eli liqhosha elibonakala luhlaza okwesibhakabhaka kwiscreen.
Okulandelayo, iwindow iya kuvula kwiscreen ekufuneka sikwenzile Khetha ifoto esifuna ukuyifaka kwi-Instagram. Oku kufana nokuba sifuna ukufaka iifoto kwiphepha lewebhu okanye ukuthumela ngeposi. Ke ngoko, into ekufuneka siyenzile kukuya kwindawo ekuyo ikhompyuter apho ifoto ebuzwayo esifuna ukuyilayisha kwiprofayile yethu. Ke sisebenzisa umkhangeli wefayile ukuya kuloo ndawo. Xa siyifumene ifoto, kuya kufuneka ucofe kuyo kwaye ucinezele iqhosha lokuvula kule festile.
Nje ukuba ifoto ikhethwe, lo mfanekiso uza kuvela kwiscreen sakho kwi-Instagram. Inyathelo lokuqala elinikezelwayo kukuhlengahlengisa ubungakanani bayo. Ukuze ilingane ubungakanani befoto esiyifumana kwinethiwekhi yoluntu. Ke ngoko, kufuneka sisike kwaye silungelelanise kuxhomekeke kwinto esiyifunayo. Emva koko sinokukunika okulandelayo, apho sinokuqhubeka khona nolungiselelo lokupapashwa kwale foto.
Kwinyathelo elilandelayo sinakho emva koko bhala isicatshulwa esifuna ukusibeka kupapasho lwefoto kwiprofayile yethu. Kuvunyelwe ukufaka isicatshulwa kunye nee-hashtag kwimeko apho ufuna ukuzisebenzisa. Ngale ndlela, ifoto iya kube sele ilungile. Xa sicofa ngokulandelayo, ifoto iya kupapashwa kwiprofayile yethu kwinethiwekhi yoluntu eyaziwayo ngokuthe ngqo. Inkqubo ngoku iphelile. Ifoto inokubonwa sele ikwiprofayile. Ke abalandeli bethu banokuyibona, bayithande okanye bashiye izimvo kuyo nangaliphi na ixesha.
Umahluko ngokulayisha kwi-smartphone
Ukuba usebenzisa i-Instagram rhoqo, uya kuba uqaphele ukuba kukho Umahluko ocacileyo kwinkqubo yokufaka ifoto kwiPC. Olona tshintsho luphambili kukuba ukuba sifaka ifoto esuka kwikhompyuter, akukho zindlela zokuhlela kweso sithombe. Ukuba ufaka ifoto kwi-smartphone yakho kwinethiwekhi yoluntu, kukho iindlela ezininzi zokuhlela.
Ukongeza ekuhlaziyeni ifoto, kunokwenzeka ukongeza amacebo okucoca ulwelo ukufumana isiphumo esifunekayo. Ke loo foto inokuhlengahlengiswa ngokubonakalayo. Kodwa oku akunakwenzeka (ubuncinci okwangoku) kuhlobo lwePC lwe-Instagram. Inye kuphela into enokwenziwa kule meko kukulungelelanisa ubungakanani befoto ofuna ukuyilayisha. Kodwa ayikho enye indlela yokuhlengahlengisa ifoto, ukwazisa iifilitha okanye wenze naluphi na utshintsho olukhoyo kwinguqulelo yoqobo yayo.
Ke ngoko, nangona ukufaka ifoto kwi-Instagram ukusuka kuhlobo lwePC yinto elula, ngaphandle kokuba iluncedo kakhulu, ayifani. Ukuze abo basebenzisi banomdla wokuhlela ukuhlela ifoto, kuya kufuneka uyithathele ingqalelo le nto. Kuba ukuba ufuna ukubanakho ukwazisa izihluzi kwifoto ekuthethwa ngayo, kuya kufuneka usebenzise ulayisho lweefoto kwi-smartphone.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I intanethi » Ungayifaka njani iifoto kwi-Instagram ukusuka kwi-PC
IHuawei P30 Pro, le yeyona flegi intsha yenkampani yaseTshayina
Uhlalutyo kunye neempawu zokubeka iliso kwimidlalo ye-AOC C24G1